အဆိုတော် လှိုင်ဦးမော် / ညီညီသူ / ဧရာဝတီ
By ညီညီသူ4February 2020
အဆိုတော် လှိုင်ဦးမော်ဟာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ် သီချင်းတွေ သီဆိုပြီး ဂီတလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နေသူ တယောက်ပါ။ “အလှပြင်ထားပါ” ၊ “No.2 Album” ၊ “အို. . . ကမ္ဘာကြီး” ၊ “အကောင်းဆုံးတေးများ” စတဲ့ Album တွေ ထွက်ရှိထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုတော် ဒိုးလုံးနဲ့လည်း တောင်ကြီးမှာ ကျောင်းသားဘဝကတည်းက တွဲလာခဲ့သူဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် လှိုင်ဦးမော်ကို Stardust Studio မှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
မေး ။ ။ နောက်ဆုံး ထွက်ခဲ့တဲ့ “အကောင်းဆုံးတေးများ” Album ကို ပရိသတ် တုံ့ပြန်မှု ဘယ်လိုရှိလဲ။
ဖြေ ။ ။ ကောင်းပါတယ်။ ကျနော်လည်း တော်တော်လေးတော့ အားရပါတယ်။ ခွေရောင်းအားအနေနဲ့ ဆိုရင်လည်း ဒီခေတ် ဒီအခါမှာ အရင်းကြေပြီး နည်းနည်းပါးပါး အမြတ်ရတယ်ဆိုတော့ မဆိုးပါဘူး။
မေး ။ ။ ပထမဆုံးခွေဖြစ်တဲ့ “အလှပြင်ထားပါ” ကို CD ပြန်ထွက်ဖြစ်တာကကော။
ဖြေ ။ ။ အဲ့ခွေက တော်တော်များများမှာ မရှိကြတော့ဘူး။ တချို့ကလည်း သိမ်းထားချင်တယ်၊ ပြန်ထုတ်ပေးပါလာလို့ လူတော်တော်များများက ကျနော့်ကိုလာပြောကြလို့ ပြန်ထုတ်ဖြစ်သွားတာပါ။
မေး ။ ။ အခုနောက်ပိုင်း အွန်လိုင်း Music Application တွေ ခေတ်စားနေပြီဆိုတော့ အွန်လိုင်း Application တွေကနေ သီချင်းအသစ်တွေ ထွက်လာဖို့ ရှိလား။
ဖြေ ။ ။ သီးသန့်လုပ်ထားတာမျိုးတော့ ကျနော့်ဆီမှာ မရှိသေးပါဘူး။ လောလောဆယ်တော့ မစဉ်းစားရသေးဘူး။ နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်လိုလာမလဲ မသိသေးဘူး။
မေး ။ ။ အွန်လိုင်း Application တွေကိုကော ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ခေတ်ကလည်း ပြောင်းနေတာပေါ့။ CD နဲ့ သွားတဲ့ခေတ်၊ တိတ်နဲ့ သွားတဲ့ခေတ် မဟုတ်တော့ဘူး။ အွန်လိုင်းကနေပဲ ကိုယ့်ပရိသတ်တွေကို ဘယ်လိုချပြပေးမလဲပေါ့။ တကမ္ဘာလုံးကလည်း ဒီလိုပဲသွားနေကြတာလေ။ စီးရီးတခုလုံး မဟုတ်ဘဲ တပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စ ချပြလို့ရနေတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့လည်း ထိတွေ့ ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။
မေး ။ ။ လှိုင်ဦးမော်က ဂီတလောကထဲ စဝင်လာကတည်းက ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်နဲ့ပဲ စဝင်လာခဲ့တော့ ကော်ပီသီချင်းတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ။
ဖြေ ။ ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ကော်ပီသီချင်းတွေကလည်း ကျနော်တို့ကို လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တဲ့ အရာတခုပဲလေ။ Own Tune ဆို Own Tune ချည်း ၊ Copy ဆို Copy ချည်း လုပ်ခဲ့တာလည်း မဟုတ်ဘူးလေ။ ကျနော်တို့ဆီမှာ သင်တန်းလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ကျောင်းလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့ခေတ်တုန်းက ခွေတခွေ ဝယ်ဖို့ လွယ်မှ မလွယ်တာ။ ခွေနားထောင်ချင်ရင် သူငယ်ချင်းတွေဆီက ငှားခဲ့ရတယ်။ လေ့လာခဲ့ရတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကော်ပီက ကျနော်တို့ကို အများကြီး အထောက်အကူ ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒီကနေပဲ ကျနော်တို့ အသွေးအသားတွေကို ဆူလောင် ပွက်သွားအောင် လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့။ အဲဒီကနေပဲ ကျနော်တို့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Music ပုံစံကို ပြန်ပြီး တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပေါ့။
မေး ။ ။ အဆိုတော် ဒိုးလုံးနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းတွေဆိုတော့ သူ့အကြောင်း အမှတ်တရ ပြောပြပေးပါလား။
ဖြေ ။ ။ သူနဲ့ကအမှတ်တရတွေ အများကြီးပဲဗျ။ စတွေ့တုန်းကလည်း တောင်ကြီးက စာကျက်ဝိုင်းမှာ စ တွေ့တာ။ အိမ်ကလည်း မနိုင်လို့ စာကျက်ဝိုင်းပို့တဲ့ အချိန်ပေါ့။ အဲ့မှာ စတွေ့ကြတာပေါ့။ ၂ ယောက်သား ခုံခေါက် သီချင်းဆိုပေါ့။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေဆိုရင်တော့ သူ့အိမ် ကိုယ့်အိမ် လိုက်လည်ကြတာ မှတ်မှတ်ရရပေါ့။ ဂစ်တာကိုင်ပြီး သီချင်းဆိုရင် သူက သူများသီချင်း မဆိုပြဘူး။ သူရေးထားတဲ့ သီချင်းပဲဆိုပြတယ်။
ကျနော်လည်း တပုဒ်စ၊ နှစ်ပုဒ်စ စရေးနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကျနော်ရေးတဲ့ သီချင်းပြန်ဆိုပြပေါ့။ နောက်ပိုင်း Recording ဝင်တော့လည်း တညလုံး အတူတူပေါ့။ မိုးလင်းတဲ့ထိ သီချင်းဆိုကြတာ။ ပြီးရင် တပုဒ်မှလည်း မဝင်ကြဘူး။ သူနဲ့တွေ့ရတာ ပျော်စရာလည်း ကောင်းတယ်၊ စိတ်ညစ်စရာလည်း ကောင်းတယ်။ သူနဲ့ကတော့ အမှတ်တရတွေက အများကြီးပါပဲ။
မေး ။ ။ ဒိုးလုံးအမှတ်တရမှာ “အဆိုးသံသရာ” ဆိုဖြစ်ပုံနဲ့ နောက်ပိုင်း Show တွေမှာကော အဲဒီသီချင်းကို ဆက်ဆိုဖြစ်သေးလား။
ဖြေ ။ ။ သူ့အမှတ်တရမှာ လူကလည်း အများကြီးဆိုကြတော့ တချို့သီချင်းတွေက တိုက်နေတဲ့အတွက် ဖယ်ပေးလိုက်ရတာပေါ့။ ကျနော့်ကို ရွေးပေးထားတာက “ကျနော်ကြိုက်တဲ့ နံပြားကို” ဆိုတဲ့။ “ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ” သီချင်း။ အဲ့သီချင်းဆိုပါလားတဲ့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင် အဲ့သီချင်းက သူ့ရဲ့နာမည်ကြီး သီချင်းတွေထဲမှာလည်း ပါတယ်ဗျ။ ကျနော် ဆိုလိုက်ခြင်းအားဖြင့် သီချင်းကို ထိပါးစေတာမျိုး ဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့လေ။ ရသ ပျက်သွားရင်လည်း ပျက်သွားနိုင်တယ်။ သူ့ကိုလည်း တန်ဖိုးထားတာကိုး။ ဖြစ်နိုင်ရင် မဆိုချင်ဘူး။
နောက်သီချင်းတွေ ထပ်ရွေးတော့ သူနဲ့ အတူတူ တွဲရေးခဲ့တဲ့ “အဆိုးသံသရာ” တပုဒ်ပေါ့။ အဲ့သီချင်းစရေးတော့ Melody ကိုအရင် စရေးတယ်။ သီချင်းက ပထမတပိုဒ်ပဲ ပြီးတယ်။ နောက်အပိုဒ်က စာသားတွေဆို ကျနော်တို့ မရေးတတ်တော့ဘူး။ မရေးတတ်တော့ သီချင်းကို ဒီတိုင်းထားထားတော့ ဒိုးလုံးရဲ့ အမေ ဒေါ်ဌေးဌေး (MM) မာမား ပေါ့။ သူဝင်ကူပြီး ရေးပေးတယ်။ စာသားတွေပေါ့။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက်က Melody ရှာပေါ့။ အဲ့ သီချင်းကို ကျနော်လည်း ပြန်အမှတ်ရတာပေါ့။
သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ အမှတ်တရထဲမှာလည်း အဲ့သီချင်းက ပါတယ်လေ။ အဲ့သီချင်းကလည်း လူတော်တော်များများ မသိကြသေးဘူးဆိုတော့ ကျနော် အဲ့သီချင်း ဆိုမယ်ပေါ့။ အဲ့ဒါနဲ့ ဆိုဖြစ်သွားတာပါ။ နောက်ပိုင်း Show မှာတော့ အဲ့သီချင်းကို မဆိုဖြစ်တော့ဘူး။ တော်တော်များများ Show တွေမှာလည်း အဲ့သီချင်း တောင်းကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် မဆိုဘူး။ ဘာလု့ိလဲဆိုတော့ အဲပွဲမှာ ဆိုခဲ့တဲ့ဟာလေးက သူ့အတွက် အမြဲတမ်း အမှတ်တရ ဖြစ်နေပါစေပေါ့။ ကျနော် သူ့ကိုတန်ဖိုးထားလို့၊ လေးစားလို့လေ။ အဲ့တခေါက်ပဲ ကျနော် ဆိုတယ်။
အဆိုတော် လှိုင်ဦးမော် (ဓာတ်ပုံ – ညီညီသူ/ဧရာဝတီ)
မေး ။ ။ “အို . . . ကမ္ဘာကြီး” Album ကို ရန်ကုန်မှာ မသွင်းဘဲ တောင်ကြီးမှာ ဘာကြောင့် သွင်းဖြစ်တာလဲ။
ဖြေ ။ ။ တောင်ကြီးက “ထွန်း စတူဒီယို” လည်း အသစ်လုပ်ချင်နေတာ။ စက်တွေကလည်း ဝယ်ထားပြီး သား။ ဖြစ်နိုင်ရင် တောင်ကြီးမှာပဲ သွင်းပေးပါလားပေါ့။ ကိုဖိုးပြုံးတို့နဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ တောင်ကြီးမှာ ပဲ သွင်းဖြစ်သွားတာ။ စတူဒီယိုကလည်း အသစ်ဆိုတော့ တောင်ကြီးအနေနဲ့ လုပ်ပြချင်တာပေါ့လေ။ သူကလည်း ပရိုဂျူဆာကိုး။ Mixing အပိုင်းတော့ ရန်ကုန်ကိုပဲ ဆင်းလာရတာပေါ့။
မေး ။ ။ နောက် Album ကကော ဘယ်ချိန်လောက် ပြန်ထုတ်ဖြစ်မလဲ။
ဖြေ ။ ။ နောက် Album က မပြီးသေးပါဘူး။ သီချင်းတွေ မကြိုက်သေးတော့ အကုန် အသစ် ပြန်လုပ်ရမယ့် ပုံပါပဲ။
မေး ။ ။ တောင်ကြီးသားတွေချည်း နောက်ထပ်တခွေ ထွက်ဖို့ ရှိသေးလား။
ဖြေ ။ ။ လောလောဆယ်တော့ မရှိသေးပါဘူး။
မေး ။ ။ လှိုင်ဦးမော်ကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုကော ဘာပြောချင်သေးလဲ။
ဖြေ ။ ။ ထွေထွေထူးထူး ပြောဖို့တော့ မရှိပါဘူး။ ကျနော် လုပ်နိုင်သလောက်တော့ သီချင်းတွေ ဆက်လုပ်နေမှာပါ။ အခုလည်း လုပ်နေပါတယ်။ အခွေ ထပ်ထွက်ဖို့အတွက်လည်း ကြိုးစားနေပါတယ်။ ။
Topics: အင်တာဗျူး, အဆိုတော် လှိုင်ဦးမော်